‘बक्स अफिस’ लागू भएको १ महिना पूरा, कार्यान्वयन कस्तो ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV ‘बक्स अफिस’ लागू भएको १ महिना पूरा, कार्यान्वयन कस्तो ? | Sagarmatha TV
‘बक्स अफिस’ लागू भएको १ महिना पूरा, कार्यान्वयन कस्तो ?
काठमाडौं । नयाँ प्रविधि र विकाससँगै सरकारले पहिलोपटक ‘बक्स अफिस’ प्रणाली शुरु गरेको आज ठिक एक महिना पूरा भएको छ । बक्स अफिस लागू भएसँगै नेपाली फिल्मी क्षेत्र उत्साही देखिनु स्वभाविक हो । बक्स अफिस लागू नहुँदा विगत लामो समयदेखि निर्माताले आफ्नो फिल्मको आम्दानीबारे सही विवरण नपाइरहेको सन्दर्भमा सरकारले यही साउन १ गतेदेखि बक्स अफिस लागू गरेपछि फिल्मी क्षेत्र थप उत्साही देखिएको हो ।
बक्स अफिस लागू भएको झण्डै एक महिना पूरा हुन लाग्यो, तर पनि पूर्ण रुपमा यसको काम पूरा नहुनु भने दुःखद् पक्ष मानिन्छ । पहिलो चरणमा बक्स अफिस काठमाडौं उपत्यकामा लागू गरिए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको । बक्स अफिस लागू एक महिना पुग्नैलाग्दा समेत यो बीचमा प्रदर्शनमा आएका चलचित्रको हिसाब–किताव कति हो ? उही पुरानै तरिकाले जानकारी पाउन सकिएको छ ।
पछिल्लो समय प्रदर्शना आएका चलचित्रका निर्माताहरुले आफ्नो चलचित्रले यति कमायो, उति कमायो भनेर हल्लाकै भरमा चलचित्रको कारोबार सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । बक्सअफिस कन्सल्टेन्ट मनिष पण्डितले भने अहिले नै फिल्मको लाइभ डाटा हेर्न असम्भव रहेको बताउँछन् । उनले काम द्रुत गतिमा भइरहेका कारण अब चाँडै यो प्रक्रिया पनि पूरा हुने बताए । उनले विभिन्न चरणमा काम भइरहेको दाबी गर्दै भने–‘डाटा टेस्टिङ प्रक्रियामा छौं । कार्यान्वयनमा समस्या भएको होइन ।
त्यसैले केही समय लागेको मात्र हो ।’ उनका अनुसार हलबाट प्राप्त हुने डाटा सही हो कि होइन ‘भेरिफिकेसन’ गर्न आवश्यक छ । ‘वितरक, निर्माताको चित्त बुझायौं । अब सही तथ्यांक सबैसँग हुन्छ । त्यसबारे जानकारी दिने नदिने निर्माताको निर्णयमा भरपर्छ ।’ उनले थपे– ‘हाल बिक्री भएको टिकट संख्या प्रत्यक्ष हेर्न मिल्दैन । तर, निर्माताहरुले शो सकिएपछि भएको सम्पूर्ण हलको कलेक्सन रिपोर्ट प्राप्त गर्छन् । इन्टरनेट, बिजुली लगायत भौतिक आवश्यकता पूरा भएपछि र केही प्राविधिक काम सकिएपछि लाइभ डाटा हेर्न सकिने उनले दाबी गरे ।
साउन १ गतेबाट राजधानीका २० हलमा बक्सअफिस लागू भएपछि राहत महशुस गरेका निर्माताहरु भने बक्स अफिस लागू भएको शुरुवाती चरणबाट सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन् । बक्स अफिस लागू भएपछि निर्माताहरु हलवाला र वितरकको ठगाईमा नपर्नेमा भने उनीहरु विश्वस्त छन् ।
वास्तवमा फिल्म क्षेत्रको वास्तविक कमाइको एकमुस्ट विवरण दिने विद्युतीय प्रणाली हो बक्स अफिस । यो प्रणालीमार्फत् कुनै पनि फिल्मको कुन हलमा कति टिकट बिक्री भयो भन्ने आधिकारिक तथ्यांक लिन सकिन्छ । यसका लागि वितरक र निर्मातालाई अनलाइन युजर आइडी र पासवर्ड दिइएको हुन्छ ।
युजर कोडका आधारमा आफ्नो फिल्मको टिकट विक्रीको लाइभ वा रेकर्डेड विवरण लिन सकिन्छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र जडान गरिएको यो प्रणाली उपत्यकाबाहिर भने यो वर्षको आर्थिक मसान्त २०७५÷०७६ भित्र लागू गर्ने सरकारको तयारी छ ।
नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव महेन्द्रप्रसाद साँखीले साउन १ गतेदेखि बक्स अफिस लागू भएपछि समग्रमा फिल्मि क्षेत्र अत्यन्त उत्साही भएको दाबी गर्छन् । बक्स अफिस लागू भएपछि अनलाइन डाटामार्फत चलचित्रको आयको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त्यसबाट राजश्व संकलनमा राज्यलाई सहयोग पुग्नेछ ।
बक्स अफिस प्रणालीमा टिकट लिएको करीब आधा घण्टामा चलचित्र विकास बोर्ड, आन्तरिक राजश्व विभाग र हल सञ्चालकलाई जानकारी हुन्छ । बक्स अफिस लागू भएसँगै हलको वर्गीकरण हुने र विदेशी विज्ञापन बन्द हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाललाई बक्स अफिसबारेको सर्भर चलचित्र विकास बोर्डमा राखिएको छ ।
बोर्डले फिल्म वितरण, निर्माता र कर कार्यालयलाई सर्भरको कोड दिएपछि मात्र अनलाइनमार्फत सम्बन्धित फिल्मको व्यापारबारे जानकारी लिन सकिन्छ । फरक फिल्मलाई फरक कोड दिइने र त्यो कोर्ड सम्बन्धित प्राधिकरणलाई मात्र थाहा हुने सदस्य सचिव साखीले जानकारी दिए ।
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले ‘बक्स अफिस लागू हुनु नै ठूलो कुरा हो, यसले हामीलाई उत्साही, खुशी नै बनाएको छ, तर राज्यले सक्रियरुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ ।’ नेपाल चलचित्र संघले भने नेपालका कतिपय स्थानमा अहिलेसम्म पनि इन्टरनेटको सुविधा नभएको भन्दै बक्स अफिस अहिले नै पूर्ण हुन नसक्ने धारणा राख्दै आएको छ ।